Faayilii - Ogeessa fayyaa talaallii kooviid-19 AstraZenekaa jedhamuu agarsiisaa jiru, Finfinnee, Bitootessa 13, 2021
Dhibeen kooviid 19 bulchiinsaa magaala Dirredawaa keessatii baballachaa deemuu isaa fi jiraattoni tarkaanfii of eeggannoo fudhachaa akka hin jire jiraatton fi hangaa’oonii himan.
Gabaasnii Addis Chekol qindeessee akka jedhutti, mootummaan gargaarsaa dhukubsatoota Kooviidf kennaa ture waan dhaabeef namootiin rakkinaaff saaxilamaa jiru.
Walgahii hubannaa hawaasaa guddisuudhaaf magaalicha keessat tasifamee irratti Itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsichaa adde Lemlem Bezabih akka jedhanitti, gostii Kooviid 19 Deelta jedhamee waamamu torban lamman darban keessatti tatamsa’insi isaa fi midhaan inni geesisaa jiru harka dhibba dabaleeraa.
Kanaan duraa guyyaatti hanga nama shanii kan ture lakkoofsii namoottan vaayirasiidhaan qabamanii yeroo ammaa garaa nama 40 olitti gudachuu isaa kan dubbatan Adde Lemlem , yemmuu koroonaan jalqabee dhukubsataa tokkoof amma birii 100,000 bulchiisnii ramadee gargaaraa ture. Amma garuu mootummaan waan gargaarsa sana dhaabeef namoonnii koovidiin qabaman ofii isaaniitiif kaffalanii waldhaanamu.
Haala amma jiruttii yoo xinnaate hanaga birri 10,000 fi birri 15,000 kaffaaludhaaf nammii danda’aa hin jiru. Gatiin qorchaa guyyaattii gara birri 3000 fi birri 4000 gahuu danda’a, namoonii qarshii hin qanbe kana eessaa fidee akka kaffalu akka hin beeknee itti gaafatamtuun biiroo fayyaa bulchiinsa Dirredawaa kun dubbataniiru.
Itti dabaluudhaanis jiraattonii baasii maallaqaa guddaa ta’ee fi du’a irraa of eeguudhaaf akka Vaayiresichaan hin qabamne of eeggannoo gochuu haala danda’an irratti mannoottan baruumsaa fi dhaabileen amantaa akka gahee isaanii taphatan waamichaa taasisaniiruu.
Poolisiin magaalaa Bulchiinsa Diredaawaa tarkaanfii yemuu Vaayirasichii jalqabae fudhachaa turan akka jalqabuuf deeman kan ibsee gabaasiin Addis Chekol dhiyeenya kana namoottan 44,265 irratti qorannoon taasifameen, jiraattonii 5,806 Vayiresichaan qabamuun isaanii beekamee, kanneen keessaa lubbuun namootta 91 darbeera.